nifanaovana tamin’ny Komanda Rolland Zakatiana, tomponandraikitry ny serasera sy ny fampitam-
baovaon’ny zandarimariam-pirenena eo amin’ny Toby Richard Ratsimandrava.
Nilaza ity manam-boninahitry ny zandarimariam-pirenena ity fa nahitam-bokany ny hetsika
fisorohana ny loza sy ny asan-jiolahy izay hetsika nifandrombonan’ny zandarimariam-pirenena mba
hanaovan’ny vahoaka fety milamina sy isantarana ny taona vaovao lavitry ny loza. Nambarany
hatrany fa na ny halatr’omby nandritra ny fety, manerana ny Nosy ihany koa aza dia nihena lavitra
raha mitaha ny salan’isa teo am-pelatan’ny zandarimariam-pirenena, tamin’ny taon-dasa.
Fanararaotan’ny malaso mantsy ny fanafihana mitam-piadiana ireo valan’omby mandritra ny fety
aman-danonana fanaon’ny olompirenena toy ireny. Tsikaritra koa fa maro ny olona sy ny vola no
mifamezivezy amin’ny volon’andro fety tahak’ireny ka mampanararaotra ireo jiolahy mpanakan-
dalana. Andrandrain’ny olom-pirenena moa ny fanapariahana ireo mpitandro filaminana toy ireny
miaro anaty taksibrosy ireny sy ny fiarovana ireo faritra mena ahiana hotafihin’ny dahalo mandritra
ny taona fa tsy amin’ny fotoanan’ny fety ihany.